“လူပျိုဆိုပြီး လိမ်ညာလက်ထပ်ခဲ့သူကို ယုံမိလို့ အကြွေး သိန်း(၃၀) နဲ့အတူ ဗိုက်တစ်လုံးနဲ့ကျန်ခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ အဖြစ်” - Padaethar
November 22, 2020 by Padaethar
တင်ခွင့်ပြုပါရှင့် အစကမတင်တော့ဘူးလို့ အရမ်းယုတ်မာလွန်းလို့တင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျေးဇူးပြူပီး ဒီပိုစ့်ကို share လေးလုပ်ပေးကြပါ။
ပုံပါ အမျိုးသားသည် ညီမကို လူပျိုလူလွတ်ဆိုပီး ၂နှစ်ကျော်ပေါင်းသင်းခဲပါတယ် သူအပြင် သူ့ညီအကိုတွေကပါ လူပျိုဖြစ်ကြောင်း ဆိုလို့ ညီမသည် သူ့ကိုယုံကြည်ခဲပါသည်။
သူနဲယူပြီး ၁နှစ်အကြာ ညီမ အမျိုးသား ဝင်းလင်းသန်း သည်အိမ်ထောင်ရှိကြောင့် ညီမ သိရှိခဲရပြီး ဝင်းလင်းသန်းကို မေးမြန်းမြန်းရာ တရားဝင်ကွာရှင်းထားတာ ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည့်အောင်ပြောခဲသဖြင့်သူ့ကိုထပ်လက်ခံခဲပါတယ်။
12.4.2020 ဝင်းလင်းသန်းသည် တရားဝင်မကွာရှင်းရသေးပဲညီမကို ပေါင်းသင်းနေထိုင်ကြောင်း သေချာသိရလို့ တစ်လင်တစ်မယား ပုဒ်မ(၁၇)နဲ့ ညီမ အမူ့ဖွင့်ခဲပါတယ်။
ညီမ အမျိုးသားသည် အချုပ်ထဲမှာနေခဲရပါတယ် ညီမကို အမျိုးမျိုးတောင်းပန်ပီး ဟိုမိန့် အမျိုးသမီးနဲ့ ကွာပေးပါမယ် အမူ့ပိတ်ပေးပါ တစ်ဖတ် အမျိုးသမီးကပါ သူကွာပေးမယ်ပြောပီးညီမ အကြိမ်ကြိမ် ဝင်းလင်းသန်းကိုမေးခဲပါသေးတယ်။
သူက ညီမကိုပဲ ပြန်ပေါင်းပါမယ်ပဲထပ်ကာတစ်လဲပြောပါတယ်ဝင်းလင်းသန်းကို အာမခံနဲ့ ပြန်ထုပ်ပီး သူတို့မြှောက်ပိုင်း ခရိုင် တရားရုံးမှာ ၂ဖတ်ရှေ့နေ သက်သေတွေနဲ့ တရားဝင်ကွာရှင်းပြီး ဝင်းလင်းသန်သည်ညီမနဲတရားဝင်ပြန်ပေါင်းခဲပါသည်။
ညီမ အမူ့ကျေအေးပေးပီး သူနဲ့၂ယောက် အပြင်ကနေ အမူ့ရုပ်သိမ်းလုပ်ခဲပါတယ် အမူ့လိုက်ငွေ (၃၀)ကျော်လောက် ညီမဖတ်က ကုန်ကျခဲပါတယ် အပြင်ကနေအတိုးနဲ့ သူနဲ့သွားချေးထားတဲ့ အကြွေးတွေလဲပါ ပါတယ်ရှင့် ….
20.8 ပိုင်းမှာအမူ့ပီးသွားပီး 22.ရက် နေ့ ညီမနဲ့စကားများခြင်းမရှိပဲ နေအိမ်ကထွက်သွားပီးဟိုဖတ် အမျိုးသမီးကို တန်းသွားပေါင်းတယ် ဟိုဖတ်အမျိူးသမီးကိုမြောက်ဒဂုံက အဲ့မိန့်မ အမဆီက ခေါ်သွားကြောင့် သိရှိရပါတယ်…
ညီမချေးပေးထားတဲ့ အကြွေးတွေနဲ့ ညီမမှာရှိနေတဲ့ ကိုယ်ဝန်အတွက်ဝင်းလင်းသန်းကို လာဖြေရှင်းပေးဖို့ အကြိမ်ကြိမ်တောင်းပန်ခဲပါသည်သူ့ဆီက ဘာဖြေရှင်းချက်မှမရတဲ့အတွက် ဒီပိုစ့်ကိုတင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။Amara News
“လူပြိုဆိုပွီး လိမျညာလကျထပျခဲ့သူကို ယုံမိလို့ အကွှေး သိနျး(၃၀) နဲ့အတူ ဗိုကျတဈလုံးနဲ့ကနျြခဲ့တဲ့ မိနျးကလေးရဲ့ အဖွဈ”
တငျခှငျ့ပွုပါရှငျ့ အစကမတငျတော့ဘူးလို့ အရမျးယုတျမာလှနျးလို့တငျရခွငျးဖွဈပါသညျကြေးဇူးပွူပီး ဒီပိုဈ့ကို share လေးလုပျပေးကွပါ။
ပုံပါ အမြိုးသားသညျ ညီမကို လူပြိုလူလှတျဆိုပီး ၂နှဈကြျောပေါငျးသငျးခဲပါတယျ သူအပွငျ သူ့ညီအကိုတှကေပါ လူပြိုဖွဈကွောငျး ဆိုလို့ ညီမသညျ သူ့ကိုယုံကွညျခဲပါသညျ
သူနဲယူပွီး ၁နှဈအကွာ ညီမ အမြိုးသား ဝငျးလငျးသနျး သညျအိမျထောငျရှိကွောငျ့ ညီမ သိရှိခဲရပွီး ဝငျးလငျးသနျးကို မေးမွနျးမွနျးရာ တရားဝငျကှာရှငျးထားတာ ဖွဈကွောငျး ယုံကွညျ့အောငျပွောခဲသဖွငျ့သူ့ကိုထပျလကျခံခဲပါတယျ။
12.4.2020 ဝငျးလငျးသနျးသညျ တရားဝငျမကှာရှငျးရသေးပဲညီမကို ပေါငျးသငျးနထေိုငျကွောငျး သခြောသိရလို့ တဈလငျတဈမယား ပုဒျမ(၁၇)နဲ့ ညီမ အမူ့ဖှငျ့ခဲပါတယျ
ညီမ အမြိုးသားသညျ အခြုပျထဲမှာနခေဲရပါတယျ ညီမကို အမြိုးမြိုးတောငျးပနျပီး ဟိုမိနျ့ အမြိုးသမီးနဲ့ ကှာပေးပါမယျ အမူ့ပိတျပေးပါ တဈဖတျ အမြိုးသမီးကပါ သူကှာပေးမယျပွောပီးညီမ အကွိမျကွိမျ ဝငျးလငျးသနျးကိုမေးခဲပါသေးတယျ။
သူက ညီမကိုပဲ ပွနျပေါငျးပါမယျပဲထပျကာတဈလဲပွောပါတယျဝငျးလငျးသနျးကို အာမခံနဲ့ ပွနျထုပျပီး သူတို့မွှောကျပိုငျး ခရိုငျ တရားရုံးမှာ ၂ဖတျရှနေ့ေ သကျသတှေနေဲ့ တရားဝငျကှာရှငျးပွီး ဝငျးလငျးသနျသညျညီမနဲတရားဝငျပွနျပေါငျးခဲပါသညျ။
ညီမ အမူ့ကအြေေးပေးပီး သူနဲ့၂ယောကျ အပွငျကနေ အမူ့ရုပျသိမျးလုပျခဲပါတယျ အမူ့လိုကျငှေ (၃၀)ကြျောလောကျ ညီမဖတျက ကုနျကခြဲပါတယျ အပွငျကနအေတိုးနဲ့ သူနဲ့သှားခြေးထားတဲ့ အကွှေးတှလေဲပါ ပါတယျရှငျ့ ….
20.8 ပိုငျးမှာအမူ့ပီးသှားပီး 22.ရကျ နေ့ ညီမနဲ့စကားမြားခွငျးမရှိပဲ နအေိမျကထှကျသှားပီးဟိုဖတျ အမြိုးသမီးကို တနျးသှားပေါငျးတယျ ဟိုဖတျအမြိူးသမီးကိုမွောကျဒဂုံက အဲ့မိနျ့မ အမဆီက ချေါသှားကွောငျ့ သိရှိရပါတယျ…
ညီမခြေးပေးထားတဲ့ အကွှေးတှနေဲ့ ညီမမှာရှိနတေဲ့ ကိုယျဝနျအတှကျဝငျးလငျးသနျးကို လာဖွရှေငျးပေးဖို့ အကွိမျကွိမျတောငျးပနျခဲပါသညျသူ့ဆီက ဘာဖွရှေငျးခကျြမှမရတဲ့အတှကျ ဒီပိုဈ့ကိုတငျရခွငျးဖွဈပါသညျ။ Amara News
သင့်ရဲ့လက်မှာ ဘာလမ်းကြောင်းလေးတွေ ပါလဲဆိုတာကို ရှာကြည့်ရအောင်
(၂၂.၁၁.၂၀) မှ (၂၈.၁၁.၂၀)ထိ (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာ ကံကြမ္မာဟောစာတမ်း